Ebumnuche bụ banyere ịjụ ihe ndị na - ege gị ntị chere ma mee site na ihe ha na - ekwu.
Na mgbakwunye na nsogbu nke ndị nnọchiteanya, usoro nyochaa nyocha niile gosiri na isi nke abụọ nke njehie bụ ntụgharị : otu anyị si eme ka nzaghachi si azịza ndị na-aza ajụjụ na-ajụ ajụjụ anyị. Ọ na-apụta na azịza anyị na-enweta, ya mere ihe ndị anyị na-eme, nwere ike ịdabere na nkwanye ùgwù-na mgbe ụfọdụ ihe ijuanya-na kpọmkwem otú anyị si arịọ. Ikekwe ọ dịghị ihe na-egosi isi ihe a dị mkpa karịa ihe egwuregwu n'ime akwụkwọ dị mma bụ Ajụjụ Ịjụ Ajụjụ site n'aka Norman Bradburn, Seymour Sudman, na Brian Wansink (2004) :
E wezụga egwuregwu a kpọmkwem, ndị nnyocha nyocha enyochawo ọtụtụ ụzọ nhazi na ihe ị na-amụta na-adabere n'otú ị si ajụ. N'ezie, ihe kpatara ya na mgbọrọgwụ a nwere aha na nyocha nyocha nyocha: edemede akwụkwọ (Kalton and Schuman 1982) . Iji chọpụta otú esemokwu mmetụta nwere ike isi metụta ezigbo nyocha, tụlee ajụjụ abụọ a yiri nchọpụta nyochaa:
Ọ bụ ezie na ajụjụ abụọ ahụ na-egosi na ha na-atụle otu ihe ahụ, ha nwetara nsonaazụ dị iche iche na nyocha nke nnyocha (Schuman and Presser 1996) . Mgbe a jụrụ otu ụzọ, ihe dị ka pasent 60 nke ndị na-aza ajụjụ kwuru na ndị mmadụ n'otu n'otu na-ata ụta maka mpụ, ma mgbe a jụrụ ya n'ụzọ ọzọ, ihe dị ka 60% kọrọ na ọnọdụ ndị mmadụ na-ata ụta (nkeji 3.3). N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, obere ọdịiche dị n'etiti ajụjụ abụọ a nwere ike iduga ndị nchọpụta na nkwubi okwu dị iche.
Akara 3.3: Ihe si na nchọpụta nnyocha na-egosi na ndị nchọpụta nwere ike ịnweta azịza dị iche dabere kpọmkwem otú ha si jụọ ajụjụ ahụ. Ọtụtụ n'ime ndị nabatara kwetara na ndị mmadụ n'otu n'otu ga-ata ụta karịa ọnọdụ mmekọrịta maka mpụ na mmebi iwu. Ihe ka n'ọnụ ọgụgụ n'ime ndị nabatara kwetara na nke a bụ na ọnọdụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya karịrị ndị mmadụ n'otu n'otu. Site na Schuman and Presser (1996) , tebụl 8.1.
Na mgbakwunye na usoro nke ajụjụ ahụ, ndị na-azaghachi nwekwara ike inye azịza dị iche iche, dabere na okwu ndị akọwapụtara. Dịka ọmụmaatụ, iji tụọ echiche banyere ihe ndị gọọmentị na-ebute ụzọ, ndị na-aza ajụjụ gụrụ ndị na-esonụ:
Ọzọ, ọkara nke ndị nabatara jụrụ banyere "ọdịmma" na ọkara jụrụ banyere "enyemaka maka ndị ogbenye." Ọ bụ ezie na ndị a nwere ike iyi ka okwu abụọ dị iche iche maka otu ihe ahụ, ha kpatara nsonaazụ dị iche iche (nọmba 3.4); Ndị America na-akọ na ọ na-enye aka na-enyere ndị ogbenye aka "karịa" (Smith 1987; Rasinski 1989; Huber and Paris 2013) .
Nkeji 3.4: Ihe si na nnyocha ndị e mere nyocha na-egosi na ndị nabatara na-akwado "enyemaka nye ndị ogbenye" ​​karịa "ọdịmma." Nke a bụ ihe atụ nke okwu mkparịta ụka nke na-aza ajụjụ ndị nchọpụta na-enweta na-adabere kpọmkwem n'okwu ha na-eji ajụjụ ha. E si na Huber and Paris (2013) , tebụl A1.
Dịka ihe atụ ndị a gbasara mmetụta ntanetị na ntụgharị okwu na-egosi, azịza ndị na-eme nnyocha na-enweta nwere ike imetụta site n'otú ha si ajụ ajụjụ ha. Ihe atụ ndị a na-eduga ndị nchọpụta mgbe ụfọdụ ka ha na-eche banyere "ụzọ ziri ezi" ịjụ ajụjụ ha nyocha. Mgbe m chere na e nwere ụfọdụ ụzọ na-ezighi ezi isi jụọ ajụjụ, echeghị m na ọ dị mgbe otu ụzọ dị mma. Nke ahụ bụ, ọ gaghị edo anya ịjụ maka "ọdịmma" ma ọ bụ "enyemaka maka ndị ogbenye"; nke a bụ ajụjụ abụọ dị iche iche na-atụle ihe abụọ dị iche iche gbasara àgwà ndị nabatara. Ihe atụ ndị a na-edugakwa ndị nchọpụta mgbe ụfọdụ ka ha kwubie na e kwesịghị iji nnyocha mee ihe. O di nwute, mgbe ụfọdụ enweghi oke. Kama nke ahụ, echere m na ihe ziri ezi ị ga-esi nweta ihe atụ ndị a bụ na anyị kwesịrị iji nlezianya rụọ ajụjụ anyị na anyị ekwesịghị ịnakwere azịza ya n'enweghị ihe ọ bụla.
Ihe kachasị, nke a pụtara na ọ bụrụ na ị nyochaa nyocha data ndị ọzọ nakọtara, jide n'aka na ị gụọ akwụkwọ ajụjụ ahụ n'ezie. Ma ọ bụrụ na ị na-eke akwụkwọ nke gị onwe gị, m nwere aro anọ. Akpa, m na-atụ aro ka ị gụkwuo banyere Bradburn, Sudman, and Wansink (2004) ajụjụ (dịka, Bradburn, Sudman, and Wansink (2004) ); enwere ihe kariri ihe m na-akọwa ebe a. Nke abụọ, m na-atụ aro na ị ga-edepụta okwu maka ajụjụ-ajụjụ si nyochaa elu. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịjụ ndị na-aza ajụjụ banyere agbụrụ / agbụrụ ha, ị nwere ike idetuo ajụjụ ndị a na-eji nyochaa n'ọchịchị dị ukwuu, dị ka ọnụ ọgụgụ. Ọ bụ ezie na nke a nwere ike iyi ka ọ bụ nkwenye, a na-agba ume ịza ajụjụ na nchọpụta nyocha (ọ bụrụhaala na ị na-ezo aka nyocha mbụ). Ọ bụrụ na i denye ajụjụ site n'ọmụmụ nyocha elu, ị nwere ike ijide n'aka na a nwalere ha, ma ị nwere ike iji nzaghachi gị nyochaa nzaghachi site na nyocha ndị ọzọ. Nke atọ, ọ bụrụ na ịchọrọ na ajụjụ gị nwere ike ịnwe ajụjụ dị mkpa ma ọ bụ mmetụta nke ajụjụ, ị nwere ike ịme nchọpụta nyocha ebe ọkara ndị nabatara natara otu mbipute nke ajụjụ ahụ na ọkara na-anata nsụgharị ọzọ (Krosnick 2011) . N'ikpeazụ, m na-atụ aro na ị na-eduzi-nwaa ajụjụ gị na ụfọdụ ndị si na mpaghara gị; ndị nnyocha na-enyocha usoro a tupu a nwalee (Presser et al. 2004) . Ahụmahụ m bụ na nnyocha nyochaa tupu oge nyocha bụ nnọọ aka.